दुबईमा फ्री भिसा फ्रिसा टिकेट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको माग, तलब कति छ ? - jagritikhabar.com
दुबईमा फ्री भिसा फ्रिसा टिकेट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको माग, तलब कति छ ?
यु.ए.ई.को बहुप्रतिष्ठित कम्पनि CMS Printing Press llc UAEमा नेपाली पुरुष तथा महिला कामदारको माग गरेको छ । CMS Printing Press llc UAEकम्पनिले विभिन्न पोस्टका लागि २१ जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो ।
न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ । कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि २ वर्षे रहेको छ । न्यूनतम तलब नेपाली रु. ३९,३१५/- रहने कम्पनीको डिमाण्ड लेटर मा उल्लेखित छ ।
तलब खान बस्न सहित ३९ हजार माथि रहेको छ । इच्छुक कामदारले जी.सी.डी. वोर्ल्डवाईड प्रा. लि. को कार्यालय सिनामंगल, काठमाडौँ मा पुष १ गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।
तपाईंले कम्पनीबाट व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि तपाईंको जम्मा गरिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडो भाउचर सङ्कलन गर्नुहोस्। यहाँ रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी नोट गर्न ।निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा तपाई सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
कागजातमा सूचीबद्ध रकम भन्दा बढी नदिनुहोस्। तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ। विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान ।गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।